Nagarik News - बसन्त बस्नेत
12 Apr 2014 | २९ चैत्र, २०७०
आफ्नै 'ओबिचुअरी' लेख्ने लेखक
काठमाडौं- चर्चित भारतीय लेखक खुशवन्त सिंहले जिन्दगीको 'सेन्चुरी' मार्न भ्याएनन्। यी तीव्र गतिका 'बलपेनर' ९९ वर्षमै 'आउट' भए। सानैदेखि हरदम जोक गरिरहनुपर्ने स्वभावका यी लेखकले २० वर्षको उमेरमा आफ्नै ओबिचुअरी लेखेका थिए।
फैलाउँदै आधा आकाश
08 Mar 2014 | २४ फागुन, २०७०
काठमाडौं– सहाना प्रधान त्यस्तो समय राजनीतिक मैदानमा ओर्लिइन् जुन बेला समाज तीन मान्यताले जेलिएको थियो।
एक– महिलाले राजनीति गर्नुहुन्न।
दुई– गरिहाले पनि व्यवस्थाविरोधी राजनीति त झनै गर्नुहुन्न।
तीन– व्यवस्थाविरोधी नै भइहाले पनि कम्युनिस्ट त झन् हुनैहुन्न।
कसरी सुरु भयो मार्च ८
अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस सन् १९११ देखि मनाउन थालिएको हो। १८९७ मार्च ८ मा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित सुती कपडा कारखानाका मजदुर महिलाले १६ घन्टाको सट्टा दैनिक ८ घन्टा काम गर्नुपर्ने माग राखे। पुरुषजत्तिकै श्रममा खटिए पनि न्यून ज्याला पाएको भन्दै समान ज्याला पाउनुपर्ने, मजदुर युनियनमा आफू पनि सहभागी हुन पाउनुपर्ने, मताधिकार हुनुपर्ने, मातृशिशु सुरक्षा हुनुपर्नेजस्ता माग उनीहरूले राखेका थिए। महिलाले इतिहासमै पहिलोपल्ट गरेको त्यो संगठित विद्रोह दबाउन अमेरिकी सरकारले कोसिस पनि गर्यो्।
१९१० मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा समाजवादी महिलाले आयोजना गरेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा क्लारा जेट्किन नामक जर्मन नेतृले मजदुर महिलाले अमेरिकी नीति परिवर्तन गराउन सफल भएको विश्ााल आन्दोलनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष मार्च ८ का दिन विश्वभरि महिला दिवस मनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिन्। अर्को वर्षदेखि तिनै कम्युनिस्टहरूले थालनी गरेको यो मार्च ८ परम्परा आजसम्म कायम छ। पछिल्ला दिनमा यसलाई महिलाको अधिकारमात्रै नभएर महिला हुनुको गौरवगाथा सम्झन पनि मनाउने गरिएको छ।
गणतन्त्रपछिका सरकारमा महिला मन्त्री : प्रतिशतमा
पुष्पकमल दाहाल सरकार– १५.३८
माधवकुमार नेपाल सरकार– ११.३६
झलनाथ खनाल– ११.७६
विश्वमञ्चका नेपाली सेतु
01 Mar 2014 | १७ फागुन, २०७०
काठमाडौं– नेपालको कूटनीतिमा चारवटा देशले विशेष महत्व राख्छन्– भारत, चीन, अमेरिका र बेलायत। यसमध्ये बेलायतबाहेक तीन देशमा राजदूत बनेर काम गरेको अनुभव थियो, सरदार यदुनाथ खनालसँग। उनी त्यस्तो बेला भारत, चीन र अमेरिकाका लागि राजदूत बने, जतिबेला एकातिर उनीहरूको परस्पर स्वार्थ टकराउँदै थियो भने अर्कातिर ती देशसँग नेपालको सम्बन्ध गिर्दो अवस्थामा थियो।
काठमाडौं— चुनावी दौडाहामा व्यस्त नेताहरू नरहरि आचार्य, ईश्वर पोखरेल र गगन थापा शुभेच्छुकले लगाइदिएका माला र अबिर पुछेर आर्यघाट दगुरे।पछिल्ला दिनमा जतिसुकै ठूला घटना भए पनि तिनले मिडियामा छाइरहेका चुनावी खबरलाई प्रभाव पार्न सकेका थिएनन् । देशका एक लेखकले सबैको ध्यान आफूतिर खिचे।
सिद्धान्त शुद्धताका लागि कसैको नाम सम्भि्कनुपर्‍यो भने पहिलो नम्बरमा मोहन वैद्य 'किरण' आउँछन्। उनलाई मार्क्सदेखि माओसम्मका सैद्धान्तिक सूत्र कन्ठै छन्। दुर्भाग्यवश, कुनै बेला 'लिटरेरी एलिट' देखि रामझुपडीसमेतलाई फकाउन र थकाउन प्रयोग हुने राता किताब आज उनका व्यक्तिगत तुष्टि पूरा गर्ने औजारमा बदलिन पुगेका छन्। कुनै बेला त्याग र समर्पणका प्रतिमूर्ति मानिने उनी आज निजी आग्रह र खुद्रा कुण्ठाबाट निर्देशित हुन पुगेका छन्। त्यसको मूल्य संविधान सभाको अर्को चुनावले चुकाउनु परिरहेको छ।
नेकपा (एमाले)को भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियु हिजोआज दुई महाधिवेशन (सम्मेलन) गर्नेगर्छ । नेतृत्व छान्ने सम्मेलन र विधान सम्मेलन । काठमाडौंमा बिहीबारदेखि जारी सम्मेलन नेतृत्व चुन्न आयोजना गरिएको हो । विडम्बना, यो मोबाइल महाधिवेशनमा परिणत हुन पुगेको छ । मोबाइल महाधिवेशन, अर्थात्, ठाउँ सर्दै सर्दै आयोजित 'गतिशील' सम्मेलन । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु बन्दसत्र आफ्ना झिटीगुन्टा बोकेर हिँड्दै हिँड्दै प्रदर्शनीमार्ग पुगिसक्दा पनि अझै नतुरिनु मोबाइल महाधिवेशनको विशेषता हो । मोबाइल महाधिवेशन अझै केही दिन लम्बिने खतरा छ ।
संविधान सभाको दोस्रो चुनावका लागि दुई महिना तीन दिन बाँकी छ। चुनावको सम्मुखमा को को उम्मेदवार बन्दैछन् भन्ने गाइँगुइँ चुल्नु अनौठो भएन। भूगोलमा खटेर राजनीति गर्नेहरू हुल बाँधेर दलका मुख्यालय र नेताका घरमा देउसी खेल्नु पनि अलिअलि अनौठो भए पनि हाम्रो देशका लागि धेरै अनौठोचाहिँ भएन।
07 Sep 2013 | २२ भाद्र, २०७०
सुनसरीको शिशु विकासिनी प्रावि मधेसाकी छात्रा आन्विका गिरी कक्षा पाँचमा पढ्थिन् । स्कुलले कविता प्रतियोगिता आयोजना ग¥यो । 'कलम' शीर्षकको कविता लेखेर उनी प्रथम भइन् । नजिकैको बलाहा गाउँस्थित शारदा माविले अन्तरविद्यालय कविता प्रतियोगिता गर्ने भयो । एक शिक्षकले सोधे, 'तिमीलाई त्यहाँ पनि जित्नु छ, होइन ?'
म तीज कहिले पनि मनाउँदिनँ। मिडियाले भन्दैनथे भने तीजबारे मलाई थाहा पनि हुन्थेन होला । हिजोआज मानिसहरू तीज सुधार्दै जानुपर्छ, परिष्कार गर्नुपर्छ भनिरहेका हुन्छन् । केही चाडहरू यस्ता छन्, जसलाई सुधार्ने होइन, बन्द नै गर्नुपर्छ । तीज पनि तीमध्ये एक हो । किनकि यो भाग्यवादी र पराधीन मनस्थितिको उपज हो।
म पतिको दीर्घायु कामना गर्दै महिला व्रत बसिरहेको देख्छु । यो सबै देखाउने कुरा हो । आठ मार्च महिलाहरूको अधिकार र प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि ठूलो विश्वव्यापी पर्व हो तर किन यहाँका महिला त्यसमा खासै चासोे देखाउँदैनन् ? किनकि त्यसमा देखाउन पाइँदैन । गहना गुडिया र लुगाफाटो प्रदर्शन गर्न चाहन्छन् यहाँका महिला । हाम्रो समाज पिछडिएको छ भन्ने बुझाउन यस्ता प्रवृत्तिले भूमिका खेलेका हुन्छन्। हिजोआज त पत्नीको दीर्घायु कामना गर्दै पुरुषहरू पनि व्रत बसेको सुन्छु । यो सबै भाग्यवादी मानसिकताको उपजबाहेक केही होइन । हिजोआज तीज मनाउनका लागि लोग्नेमान्छेले नै प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । यो बेकारको कुरा हो ।
13 Aug 2013 | मङ्गलबार २९ श्रावण, २०७०
'बहिष्कार गर्नु पनि चुनावमा भाग लिनु नै हो,' यसो भन्दै उनीहरू बसमा उक्लिँदै गर्दा साँझ साढे सात बजेको छ। साउने झरीमा निथ्रुक्क चार शहीदलाई दायाँ पार्दै कीर्तिपुर यातायात शहीद गेटबाट अघि बढ्दैछ।